NY MAGY DISO LALANA · L'Homme, son aura et son évolution
> NY MAGY DISO LALANA
Classé dans : — cyrius @ 13:55
Aiza moa no teraka ny fanarahan-dalàna ?
Fa nanofy ho nahita ny kintany izahay
Azafady ry » mpitondra fanjakana «
Aiza ilay toerana ? Mba lazao anay
Aiza moa izao ilay mpifehy ny firenena ?
Ny lalàna, fa io no hany harena
Sy fanantenan’ny firenentsika
Mba ho tanteraka amin’izay ilay hoe ho sambatra isika
Nivezivezy teny izahay fa tsy nahita
Ireto izao no vatsy anananay sisa
Niharan’ny tsy rariny tetsy sy teroa
Izay nanananay izao ritra avokoa
Izaho koa mba toa anareo
Nandre izany koa aho teo
Mandehana, tadiavinareo magy
Dia mba ilazao, f’izaho koa mba hitsaoka azy
Nahalala ny fitaka ny magy, ka nivily lalana
Raha izy no antenaina, i Paoly hono andrasana
Rahoviana koa izany no hoe ho tan-dalàna ?
Sao izao ary ny hoe tany tsy misy fanjakana ?
Une réponse à “NY MAGY DISO LALANA”
10 mai, 2017 à 13:30
Lasa ihany ny aingam-panahy raha mahatsiaro fa haino aman-jery 80 no nakatona nanomboka tamin’ny 2009, noho ny tsy fanarahan-dalàna raha ny filazan’ny fitondrana.
Misy kosa radio tsy fanta-pototra manao fanalam-baraka ny fiainana olona iray monjasy manelingelina amin’ny fotoana rehetra ary mandefa ny feony indraindray amin’ny toerana sasany ao an-trano.
Tsy azo lazaina ho tsy fantatry ny fanjakana io radio hafakely io na ny orinasa mpamokatra azy.
Aiza ho aiza ao amin’ny lalàna azafady no milaza fa ara-dalàna izy io ?
Eny Anosibe Ambohibarikely moa no monina ny tena, saingy izay rehetra aleha andrenesana azy io avokoa,
Misy fantatra tsara ny olona mampiasa azy io.
- fanjakana dinika forum